Waad ku mahadsan tahay hadiyadaha loogu talagalay waayeelka faafinta farxadda fasaxa! - Cuntooyinka giraangiraha
Mahadsanidin Hadiyadaha Waayeelka loogu talagalay faafinta farxadda fasaxa!
Thanks to Hadiyadaha Waayeelka, Cunnooyinka badan ee qaatayaasha Wheels waxay heli doonaan wax yar oo dheeri ah oo ay weheliyaan cuntooyinkooda maalmaha soo socda. Hadiyadaha waayeelka waa mid aan faa'iido doon ahayn oo maxalli ah oo ku midoobay Cuntada Taayirada si loogu keeno hadiyado fasax ah waayeelka. Si la mid ah Cunnooyinka 'Wheels on mission', Hadiyadaha Waayeelka waxay u shaqeeyaan si loo hubiyo in waayeelka maxalliga ahi ay ula wadaagaan farxadda xilliga fasaxa.
Hadiyadaha waayeelka ayaa aqoonsan in dadka waayeelka ah ay ku adag tahay inay ka baxaan guryahooda ama aysan yeelan karin qoys ku dhow. Sababtoo ah mutadawiciinta Cunnada ee Wheels ayaa horayba u sii waday inay cunno u fidiyaan dad badan oo xaaladdan ku jira, Hadiyadaha Waayeelka waxay iskaashi la sameeyeen in badan oo ka mid ah goobaheenna gaarsiinta si looga caawiyo hadiyadaha inay helaan guryo wanaagsan.
Bilaha ka horreeya ciidaha, shaqsiyaadka iyo kooxaha goobta shaqada waxay ka caawiyeen Hadiyadaha Waayeelka buuxinta liistada ay rabaan ee ah waxyaabaha ugu badan ee la codsaday. Hadiyadaha waxaa lagu ururiyaa foostooyin hadiyado ah oo la dhigay hareeraha Magaalooyinka Mataanaha ah ka dibna la baakadeeyo oo loo diro waayeelka baahan.
Thanks to iskaashiga aan la leenahay Hadiyadaha Waayeelka deriskeena waayeelka ah kaliya mahelaan cuntooyin nafaqo leh iyo booqasho saaxiibtinimo, waxay sidoo kale helaan hadiyad fasax ah oo hubaal ah inay wejigooda dhoola cadeynayaan. Halkan guji si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Hadiyadaha Waayeelka. Haddii aad jeclaan lahayd inaad qayb ka noqoto caawinta kalinimada iyo go'doominta bulshada, sidoo kale waad sameyn kartaa Saxiix si aad u noqotid mutadawiciin Cunto ah!
Diisambar 20, 2017